Nei Uchifanira Kukwiridzira kuGoogle Universal Analytics | Martech Zone
Nei Uchifanira Kukwiridzira kuGoogle Universal Analytics
Chitatu, October 15, 2014 Svondo, October 19, 2014 Tim Flint
Ngatitorei uyu mubvunzo ubve munzira izvozvi. Unofanira kukwidziridzira ku Google itsva yeUniversal Analytics? Hongu. Muchokwadi, iwe ungangove watove wakakwidziridzwa kuUniversal Analytics. Asi, nekuda kwekuti Google yakagadzirisa account yako iwe, hazvireve kuti haufanire kuita chero chinhu kana kuti uri kuwana zvakanakisa kubva kuakaundi nyowani yeUniversal Analytics.
Pari zvino, Google Universal Analytics iri mune chetatu chikamu yekuburitswa kwayo. Iyo iri kunze kwe beta uye maakaunzi mazhinji ari kungoitwa ekugadziridzwa. Muchokwadi, haugone kana kusarudza iyo yekare vhezheni yeiyo analytics paunenge uchigadzira account nyowani zvekare. Pakatangira Universal Analytics kubeta, yanga ichiri kushaya chakakosha kumakambani mazhinji. Iko kwaive kuratidza kushambadza maficha ayo anotendera iwe kuti ugadzire kudzorerazve zvinyorwa. Ikozvino, zvinoratidzira maficha zvakanyatso nyongedzwa muUniversal Analytics (UA), zvichireva kuti hapana chinhu chinobata account nyowani kubva kuenda neUA. Nekudaro, izvi hazvireve kuti nekuda kwekuti account yako yagadziridzwa kuti hapasati paine zvinhu zvekutarisa kana uchivandudza.
Parizvino, kana kodhi iri pane yako saiti ikashandisa ga.js, urchin.js, kana iyo WAP vhezheni yekodhi, iwe uchafanirwa kugadzirisa iyo kodhi kana Google yasvika chikamu chechina cheUniversal Analytics kusimudzira. Mukati memakore maviri ekutanga chikamu chechina, iwo mavhezheni ekodhi achadzikiswa. Uye, hausi script chete unozodzikisirwa. Kana iwe parizvino uine zvimiro zvetsika kana mushandisi akatsanangurwa akasiyana auri kushandisa kuteedzera data, uchafanirwa kuvashandura kuita zvimiro zvetsika kuti ugone kuzvishandisa, sezvo zvichadzikiswa futi.
Izvi zvaizoreva zvakare kuti mune ramangwana, kana iwe uri kushandisa iyo yekare nzira yekuita zviitiko zvekutevera, zvakare ichafanirwa kuvandudzwa kune iyo nyowani vhezheni yekodhi yekutevera kodhi. Saka, kana kodhi yako isina kuvandudzwa parizvino, nei uchienda mumatambudziko ese izvozvi pane kumirira makore maviri?
Sei Kupedzisa Kuvandudza?
Chikonzero cheGoogle chekusimudzira chaive chisiri chekuti vatambise nguva yako. Vakaburitsa zvimwe zvinhu izvo, kana iwe ukatora nguva kuzviita, zvinokugonesa kuyera zvinhu zvausina kumboziva kuti zvaigona kare. Iyo itsva chikuva inokutendera iwe ku:
Unganidza Dhata Kubva Chero Chinhu
Gadzira Tsika Zviyero uye Tsika Metrics
Simbisa maIDhi evashandisi
Shandisa Enhanced Ecommerce
Google ikozvino ine nzira nhatu dzekuunganidza data: analytics.js emawebhusaiti, nharembozha SDK yeIOS uye Android, uye - kwandiri zvinonyanya kufadza - iyo yekuyera protocol yezvigadzirwa zvemadhijitari. Saka ikozvino unogona kuteedzera mawebhusaiti ako, maapplication ako, uye kofi yako muchina kana iwe waida, mukati meGoogle Analytics. Vanhu vari kutoisa yekuyera protocol kushanda kuti vagone kuverenga mu-chitoro chetsoka traffic, kuongorora tembiricha, uye zvimwe. Mikana yacho haina magumo, kunyanya nekuda kwechinhu chitsva chinotevera.
Tsika Dhivha uye Tsika Metrics
Tsika dzakaenzana uye tsika metric ndiyo chaiyo yakasvinwa vhezheni yekare tsika misiyano. Kuti ndikupe pfungwa yekuti masimba matsva aya anogona kuva nesimba zvakadii, ngatiti kana munhu achinyorera sevhisi yako inoitika seYelp-senge sevhisi, unovabvunza mibvunzo yakati wandei. Iwe unogona kuvabvunza iwo mubvunzo une tsika yakasarudzika iyo yaunodana kufarira nzvimbo yekudyira. Mhinduro dzemibvunzo iyi dzinogona kunge dziri dzekuMexico chikafu, zvitoro zvemasangweji, nezvimwe. Iwe unogona kubva wabvunza mubvunzo wekutevera kuti kangani pamwedzi chavanodya kunze. Izvi zvinokupa iwe mutsva tsika metric ye huwandu hunodya pamwedzi kana AEOM. Saka, ikozvino unogona kutarisa data rako kuti ugovane vashandisi vakasiyana kuti uone mashandisiro avanoshandisa saiti yako. Semuenzaniso, iwe unogona kugovera vanhu vanofarira zvitoro zve sangweji zvinodya kunze ka5 pavhiki. Izvi zvinogona kukubatsira iwe kuti uzive maitiro ekuronga zvirimo pane yako saiti. Mikana yacho haina magumo, kunyanya kana uchiwedzera izvi kune ako nharembozha. Kana iwe ukawedzera iyi yekutevera kune yako nhare mbozha, iwe unogona kutsvaga kune ese marudzi enzira dzevatengi vari kutamba mutambo.
Sezvo vazhinji vatengi vari kushandisa nharembozha uye vatengi vari kuchinja pakati pemafoni, mapiritsi, uye zvimwe zvigadzirwa, haungamboziva chaizvo kuti vangani vashoma uye vanoshanda vashandisi vawaive navo pamwedzi netsika analytics. Iye zvino nekugadzira yakasarudzika ID iyo iwe yaunopa kune vashandisi vako, unogona kuteedzera mushandisi anoshandisa foni yavo, piritsi, uye laptop kuwana yako saiti seumwe mushandisi. Izvi zvinokupa iwe kunzwisisika kupfuura nakare kose mashandisiro anoita vatengi vako sevhisi yako. Zvinoreva kuti hapachina vaviri kana vatatu vanoverenga vashandisi. Yako data yakangowana nzira yekuchenesa.
Nemishumo yakasimbiswa yeecommerce, usango tsvaga izvo zvakatengwa nevashandisi pane yako saiti uye kuti imarii yakaunzwa. Tsvaga kuti vakapedzisira sei kutenga. Iwe unozowana mishumo senge izvo vatengi vari kuwedzera kune yavo ngoro uye zvavari kubvisa kubva mungoro dzavo. Iwe unotozoziva pavanotanga Checkout uye pavanenge vachigamuchira kudzoserwa. Kana ecommerce yakakosha kune yako saiti, tarisa zvakadzama mune izvi pano sezvo paine zvimwe zvakawanda zvekutarisa.
Heino vhidhiyo yekuti sei MutengoGrabber iri kushandisa Google Universal Analytics:
Wakamirira chii? Tora mukana weiyo nyowani dhata iwe yaunowana kuti iwe ugone kupa ako vatengi chiitiko chinotori nani pane zvishandiso.
Tags: google analyticsgoogle universal analyticsmutengouniversal analyticsgadziridza google analyticssimudzira google analyticskukwidziridzira kune yakasarudzika analyticschii chinonzi universal analyticsnei uchivandudza kune universal analytics
Tim Flint ndiye Mutungamiri we Flint Analytics, dhijitari inomiririra inotarisisa pamhepo inobhadharwa midhiya, webhu analytics, uye huwandu hwekushandurwa kwemakambani makuru nemadiki. Ndiye zvakare muvambi we Smartups Indy, boka remwedzi wekusangana rinodzidzisa vatangi vekutanga uye vashambadzi vanoshandira ekutanga maitiro ekuvandudza mabhizinesi avo.
Unofanirwa Kuvaka kana Kutenga Yako Inotevera Yekushambadzira Platform?